Dawlada Itoobiya oo sheegtay inay aad ula shaqeyn doonto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya |
Dawlada Itoobiya oo sheegtay inay aad ula shaqeyn doonto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
Addisababa (estvlive) 11/02/2017
Dawlada Itoobiya ayaa sheegtay inay aad ula shaqeyn doonto madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/Laahi Farmaajo.
Shalay ayaa dawlada Itoobiya ay farriin boogaadin ah usoo dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/Laahi Farmaajo guushii doorashada uu ka gaaray awgeed. Waxay sidoo kale sheegtay inay taageero buuxda la garab taagan tahay.
Wuxuu helay 184 cod halka madaxweynihii hore ee dalku uu helay 97 cod.
Farriin hambalyo ah oo raisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn usoo diray madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/Laahi Farmaajo ayuu ku sheegay in doorashadu ahayd mid guul ku dhammaatay ayna guul weyn u tahay ummada Soomaaliyeed.
Wuxuu Hailemariam Desalegn intaa raaciyay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/Laahi Farmaajo uu xoojin doono xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya.
Raisul wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn ayaa intaa ku daray in uu aad ula shaqeyn doono madaxweynaha cusub ee Soomaaliya si Soomaaliya ay mar kale cagaheeda ugu istaagto kadib dagaal Soomaaliya halakeeyay muddo ka badan 26 sano.
Midowga Afrika, Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa sidoo kale ugu hambalyeeyay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya guushiisa.
Dhanka kale, Golaha Ammaanka ee QM ayaa soo dhaweeyay sida habsamida leh ee Arbacadii lasoo dhaafay loo soo afmeeray doorashadii madaxweynaha ee Soomaaliya.
Arbacadii ayaa caasimada Muqdisho waxaa xubnaha cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ku doorteen madaxweynaha cusub, Maxamed C/Laahi Farmaajo.
15ka xubnood ee Golaha Ammaanka ee QM ayaa Jimcihii shalay bayaan ay soo saareen ku taageeray madaxweynaha dalka Soomaaliya ee cusub.
Waxay sidoo kale boogaadiyeen horumarka dhanka siyaasada ah ee Soomaaliya ee soo socday laga soo bilaabo sanadkii 2012.
Waxay ugu baaqeen soo magacaabida wasiirada si waqti cayiman leh isla markaana hufan.
Sidoo kale ayay ugu baaqeen madaxweynaha cusub inuu abaarta wax ka qabto asagoo ay sheegeen inay la gudboon tahay inuu qaado tillaabooyin wax ku ool ah oo abaarta wax looga qabanaayo.
QM ayaa sheegtay dhawaan in in ka badan 40% dadka Soomaaliya ay u baahan yihiin cawimaad raashin ah maadaama aysan heysan raashin ku filan.